Thursday October 25, 2018 - 11:36:06 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Kadib laba maalmood oo dagaallo iyo qaraxyo ay lakulmayeen ciidamada shisheeyaha AMISOM ayay ugu dambeyn dib uga laabteen deegaan kala qeybiya gobollada Hiiraan iyo Sh/dhexe.
Wararka ka imaanaya halka ay iska galaan labadan gobol ayaa sheegaya in ciidamada Burundi oo maalin ka hor kasoo baxay magaalada Jowhar ay dib uga laabteen halka loo yaqaan Daarusalaam oo ku dhow deegaanka Fiidoow iyagoo aan gaarin ujeedkoodi.
Sidoo kale ciidamada Jabuuti oo iyana kasoo baxay degmada Jalalaqsi ayaa dib ugu laabtay saldhigyadii Melleteri oo ay kasoo dhaqaaqeen iyagoo aan gaarin hadafkooda oo ahaa in ay sahay kala wareegaan ciidamada Burundi.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamadan huwanta ah ee ku mideysan dalladda AMISOM ay 7 weerar oo isugu jiray qaraxyo iyo weeraro dhabbagal ah kala kulmeen xoogaga Al Shabaab arrinkaas oo sababay in ay is khilaafaan.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa xaqiijinaya in khilaaf xooggan uu soo kala dhaxgalay saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada Burundi ee Sh/dhexe ku sugan iyo taliska ciidanka Jabuuti ee gobolka Hiiraan.
Saraakiisha Jabuutiyaanka ah waxay diideen in ay ka gudbaan deegaanka Fiidoow ayna lasoo wareegaan sahaydii Jowhar loogasoo daabulay iyagoo sabab uga dhigaya cabsi ay ka qabaan weerar cag marin ah oo Al Shabaab uga yimaad waxayna ka codsadeen saraakiisha Burundi in saadka ay ugeeyaan Jalalaqsi.
"Saraakiisha ciidamada Jabuuti waxay diideen in ay saadka kula wareegaan deegaanka Daarusalaam oo ciidamadii Burundi ay soo gaaren maalin ka hor halka saraakiisha ciidamada Burundi ay ka biya diideen ayna ku eedeeyeen Jabuutiyaanka meer maarin iyo in ay shirqool umaleegayaan" sidaas waxaa yiri goob jooge SomaliMeMo lahadlay.
Wararka ayaa intaas ku daraya in labada ciidan ay kala laabteen, ciidamada Burundi ayaa saaka aroortii hore gaaray garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar halka ciidamada Jabuuti ay isla shalay dib ugu laabteen degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan.
"Labada ciidan waa kala laabteen kadib markii ay weeraro kala kulmeen Al Shabaab, ciidamada Burund saadkii ay u wadeen kuwa Jabuuti dib ayay ugu celiyeen Jowhar sidaas ayayna Jabuutiyaanku ugu hungoobeen wixii ay doonayeen" ayuu hadalkiisa sii raaciyay goob jooge ku sugan Fiidoow.
Dhammaan deegaanadii lagu dagaallamay waxaa uharay oo si adag u difaacday dagaalyahannada Al Shabaab halka ciidamada huwanta ah oo saraakiishooda is lacnadayaan ay dib ukala laabteen saldhigyadii ay lama maalmood ka hor kasoo dhaqaaqeen.
Wadada laamiga ah ee xiriirisa Jowhar iyo Buula Burde ayaa ah mid xiran oo afartii sano ee lasoo dhaafay aanay wax gaadiid ah isticmaalin waxayna isku bedeshay howd ay geedo ku baxeen taas oo ku qasabtay ciidamada huwanta ah in ay isticmaalaan waddooyin qarda jeex ah oo unugul in Al Shabaab weeraro kula beegsato.